नेपालमा भूकम्पको सम्भावित खतराबारे २ महिनाअघि प्रकाशित वैज्ञानिक शोधपत्रमा के छ ? – Dcnepal
नेपालमा भूकम्पको सम्भावित खतराबारे २ महिनाअघि प्रकाशित वैज्ञानिक शोधपत्रमा के छ ?
प्रकाशित : २०७७ भदौ ३१ गते ८:४७
काठमाडौं। नेपालमा आज बिहान मात्र शक्तिशाली भूकम्प गएको छ । भूकम्पको केन्द्रविन्दू सिन्धुपाल्चोक र तीब्रता ६ म्याग्नेच्युडको रहेको नेशनल सिस्मोलोजिकल सेन्टरले जनाएको छ । भूकम्पबाट नेपालमा त्रासको वातावरण बनेको छ । यसले के कति क्षति भयो भन्नेबारे आधिकारिक जानकारी आइसकेको छैन । ५ वर्षअघि २०७२ मा शक्तिशाली भूकम्प झेलेका नेपालीले त्यो पीडा अझै बिर्सन सकेका छैनन् । यही कारण पनि आजको भूकम्पले निकै त्रासको वातावरण बनाएको हो ।
नेपाल भूकम्पको उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेको वैज्ञानिकहरुले यसअघि नै बताउँदै आएका छन् । नेपाल जुन ठाउँमा अवस्थित छ त्यहाँको जमिनमुनिबाट हिमालयन प्लेट्स र फल्ट्स सुरु हुन्छन् । यी प्लेट्स र फल्ट्स भारतीय टेक्टोनिक प्लेट्स र फल्ट्ससँग जोडिएका छन् । २ महिनाअघि प्रकाशित एक वैज्ञानिक शोधपत्रमा भारतीय टेक्टोनिक प्लेट्स र फल्ट्स लगातार हिमालयतर्फ सरिरहेकोले यहाँ भूकम्पको उच्च जोखिम रहेको बताइएको थियो । यसबारे २ महिनाअघि डिसीनेपालमा समाचार प्रकाशित भएको थियो ।
युनिभर्सिटी अफ अल्बर्टाका शोधकर्ताहरुले गरेको अध्ययनमा यस्तो खतरा पत्ता लागेको हो । शोधकर्ताहरुले नेपालमा पेट्रोलको खोजीको क्रममा जमिनभित्र फरक किसिमका आवाजहरु सुनेको बताएका छन् । यी आवाजहरु, जमिनको सतह र टेक्टोनिक प्लेट्समा लगातार भइरहेका परिवर्तनका आधारमा शोधकर्ताहरु यस्तो निष्कर्षमा पुगेका हुन् । शोधकर्ताहरुको पूरा शोधपत्र अमेरिकाको वैज्ञानिक जर्नल प्रोसिडिङ्स अफ द नेशनल एकेडेमी अफ साइन्सेज (पीएनएएस) मा प्रकाशित गरिएको छ । यो शोधपत्र पहिलो पटक गएको जुलाइ १३ (असार २९) मा प्रकाशित भएको थियो ।